Abesifazane nezwi elimqoka ekukhetheni – Bayede News
Abesifazane nezwi elimqoka ekukhetheni
NAKUBA abalandela ipolitiki yase-United Kingdom
Posted on 21 June 2019 by Bayede-News
UNdunankulu uTheresa May
NAKUBA abalandela ipolitiki yase-United Kingdom bengakufakazela ukuthi izimpawu zokuthi ilungu lePhalamende uMnu uBoris Johnson kungenzeka kube nguye ongathatha isikhala sobenguNdunankulu uNkk uTheresa May, kodwa bekungelula ukuqagula njengoba umbusazwe uguquka ihora ngehora.
Ukhetho lweqembu likaJohnson iConservative Party lubeka isithombe esicacile ngokuthi nguyena ongase athathe lesi sikhundla esiphezulu eBritain. UJohnson uhamba phambili ngamavoti ali-114 okungamaphesenti angama-36.4 amalungu ePhalamende eConservative Party.
Omlandelayo uJeremy Hunt unamaphesenti ali-13. Endaweni yesithathu kukhona uMichael Gove noDominic Raab osendaweni yesine. Amalungu ePhalamende aleli qembu o-Andrea Leadsom, uMark Harper, no-Esther McVey abakwazanga ukuqhubeka nokuvotelwa emuva kokuthola amavoti angaphansi kwamaphesenti amahlanu esiwombeni sokuqala sokhetho. Ngokombiko wesizinda sokwazisa eBritain iGuido Fawkes uBoris Jonson akayena umholi othandwa kakhulu ngabesifazane ngenxa yezinkulumo zakhe. Iningi lamalungu eqembu iConservative ngabesilisa abangamaphesenti angama-80 kuthi u20% kube ngabesifazane. Iqhaza labesifazane libalulekile okhethweni lukaNdunankulu ozovala isikhala sikaNkk uMay okusho ukuthi yibo abangacishe bacacise ngokuthi ngubani ongahola leli lizwe.
Ngenxa yegebe elikhona ngokobulili indlela okuvotwa ngayo idale okukhulu ukwehlukana. Ilungu lePhalamende uDominic Raab osanda kuphumela obala wathi akacwasi ngokobulili ungomunye wabanamathuba amaningi njengoba ukwesekwa kwakhe ngabesifazane kungamaphesenti angama-25 kuthi abesilisa babe ngamaphesenti angama-75. UJohnson wesekwa yisibalo esincane sabesifazane, kodwa ngaphakathi eqenjini kukhona amalungu agqamile esifazane amesekayo njengoPenny Mordaunt no-Amber Rudd. Iningi lamalungu ePhalamende leConservative Party liseningizimu ye-England futhi yilapho naleli qembu lesekwa khona. UNkk uMay obehola leli qembu wamemezela ukuthi uzozibeka phansi izintambo emuva kokwehluleka ukufeza isifiso sakhe ngeBrexit. Kubhekeke ukuthi uNdunankulu omusha amenyezelwe ngasekupheleni kukaNtulikazi.
UJohnson uphinde waziveza njengomuntu osilambele lesi sikhundla ngesikhathi kunenkulumongxoxo kuthelevishini ngoLwesithathu. Lapha ubetshela khona abantu baseBritain nomhlaba ukuthi yikuphi okungalindelwa kuyo uma enikwa ithuba lokuhola izwe. Usekuvezile ukuthi ufuna ukukhipha izwe ngaphansi kwe-Europen Union zingama-31 kuMfumfu. Imbangi yakhe uRory Stewart osezibophezele ngokugwema okungaba yisivumelano uhlulekile ukugadla kuJohnson
Kubonakala uJohnson eshoshela ekufezeni iphupho lakhe lokuhola iConservative Party nokuzomenza ahole izwe njengoba ukwesekwa kwakhe eqenjini kulokhu kukhula, kodwa kukhona abathi izinto zisengaguquka. Umkhankaso wakhe ubusebenzisa iqhingasu lokusebenza buthule agweme ukuphawula njalo kwabezindaba nakuba enengosi kwamanye amaphephandaba.
UJohnson utshele ababukeli balolu hlelo ukuthi, “ Kumele siphume ngobuningi zingama-31 kuMfumfu ngoba uma kungenjalo nginovalo lokuthi sizokhala ngaphansi silahlekelwe ukuzethemba ngokwepolitiki. Abantu baseBritain sebeya ngokucikeka”.